အဖေတူသားဖြစ်စေရမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်တဲ့ ခင်လှိုင့် သား နေရဲ - Cele Platform
ဟာသလူရွှင်တော် ခင်လှိုင်ရဲ့ သားဖြစ်သူ နေရဲဟာ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေပြီး အဖေရဲ့ စကားကိုလဲ မြေ၀ယ်မကျ နားထောင်တဲ့ သားလိမ္မာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ ဖိုက်တင်တွေ အက်ရှင်ကားတွေမှာတော့ တကယ့် ကိုအမိုက်စားသရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေရဲ ဟာ အလုပ်တွေများနေတာကြောင့် မိသားစုတွေ မဆုံဖြစ်တာ ကြာပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောရင်း အဖေပြောတဲ့ အမှတ်တရတွေကိုလဲ ပြောပြလာပါတယ်။
နေရဲ ပြောထားခဲ့တာကတော့ “ အလုပ်တွေမအားတာရယ် အဖေကလဲမအားတာရယ်နဲ့ မိသားစုတွေမဆုံတာ တော်တော်လေးကြာပြီ ….မနေ့ကအဖေခရီးကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းစကားတွေပြောလိုက်တာ မနက်မိုးလင်းခါနီးသွားတယ်။ အဖေပြောပြတဲ့ ဆုံးမတဲ့ စကားတွေ သားထပ်ပြီးမှတ်ထားပါ့မယ်။
“ ဒီလိုဘဲငယ်ငယ်လေးထဲ အဖေအိမ်မှာတစ်ယောက်ထဲအိပ်မပျော်လို့ ဘီယာသောက်နေရင် ဘေးမှာအမြည်းစားရင်း အဖေ့ကို အဖော်ပြုပြီး….အဖေ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေနားထောင်ရင်းနေလာခဲ့တာ ကျွန်တော်အခုဆို၂၅ပြည့်တော့မယ်…. အဖေ့စကားတွေသား အမြဲနာခံ လိုက်နာပါတယ်….အဖေတူသားဖြစ်စေရပါမယ်…❤️🥰အဖေ့ဆုံးမစကားတွေကသားအတွက်တော့ အဖေပြောပြထားတဲ့…..”မြတ်နိုးခြင်း တန်ဖိုးပါ”” ဆိုပြီး အဖေပြောတဲ့ အမှတ်တရတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
နေရဲဟာ မကြာခင်မှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့် နိုင်ငံကြီးသားဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာလဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး တစ်ချို့သော ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများစွာမှာလဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
နေရဲ ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။ CRD_May Phyo(MML),Source – Nay Ye
ဟာသလူရှငျတျော ခငျလှိုငျရဲ့ သားဖွဈသူ နရေဲဟာ အနုပညာအလုပျတှလေုပျကိုငျနပွေီး အဖရေဲ့ စကားကိုလဲ မွဝေယျမကြ နားထောငျတဲ့ သားလိမ်မာလေးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူက ရုပျရှငျကားကွီးတှေ ဖိုကျတငျတှေ အကျရှငျကားတှမှောတော့ တကယျ့ ကိုအမိုကျစားသရုပျဆောငျနိုငျသူတဈယောကျလဲ ဖွဈပါတယျ။
နရေဲ ဟာ အလုပျတှမြေားနတောကွောငျ့ မိသားစုတှေ မဆုံဖွဈတာ ကွာပွီဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ပွောရငျး အဖပွေောတဲ့ အမှတျတရတှကေိုလဲ ပွောပွလာပါတယျ။
နရေဲ ပွောထားခဲ့တာကတော့ “ အလုပျတှမေအားတာရယျ အဖကေလဲမအားတာရယျနဲ့ မိသားစုတှမေဆုံတာ တျောတျောလေးကွာပွီ ….မနကေ့အဖခေရီးကပွနျရောကျရောကျခငျြးစကားတှပွေောလိုကျတာ မနကျမိုးလငျးခါနီးသှားတယျ။ အဖပွေောပွတဲ့ ဆုံးမတဲ့ စကားတှေ သားထပျပွီးမှတျထားပါ့မယျ။
“ ဒီလိုဘဲငယျငယျလေးထဲ အဖအေိမျမှာတဈယောကျထဲအိပျမပြျောလို့ဘီယာသောကျနရေငျ ဘေးမှာအမွညျးစားရငျး အဖကေို့ အဖျောပွုပွီး….အဖရေဲ့အတှေးချေါတှနေားထောငျရငျးနလောခဲ့တာ ကြှနျတျောအခုဆို၂၅ပွညျ့တော့မယျ…. အဖစေ့ကားတှသေား အမွဲနာခံ လိုကျနာပါတယျ….အဖတေူသားဖွဈစရေပါမယျ…❤️🥰အဖဆေုံ့းမစကားတှကေသားအတှကျတော့ အဖပွေောပွထားတဲ့…..”မွတျနိုးခွငျး တနျဖိုးပါ”” ဆိုပွီး အဖပွေောတဲ့ အမှတျတရတှကေို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
နရေဲဟာ မကွာခငျမှာ ရုံတငျပွသတော့မယျ့ နိုငျငံကွီးသားဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားမှာလဲ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီး တဈခြို့သော ရုပျရှငျ ဇာတျကားမြားစှာမှာလဲ ပါဝငျသရုပျဆောငျနကွေပွီး ဖွဈပါတယျ။
နရေဲ ရဲ့ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ရေးသားဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ ဖတျရှု့ပေးကွတဲ့ မိုမိုလေးခဈြပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူး တငျရှိပါတယျ။ CRD_May Phyo(MML),Source – Nay Ye
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အလှမယ်(၃)ယောက်အပြင် ထိုင်းအလှမယ် SunSun နဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမည့် မြင့်မြတ်